Cheka - Chimiro chirikusimba chirimo chino | Bezzia
Susana godoy | 13/05/2022 10:00 | Chii chandinopfeka
Takazviona kunyangwe muhumambo uye ndezvekuti kucheka-cheka kuripo zvakare dzatove mumwaka mutsva uno. Nguo dzakaita semarokwe kana majumpsuits anozvipira kwaari sezvaasati amboita. Brushstroke yepakutanga uye ruvara iyo ichave iripo zuva rega rega rechirimo uye zvechokwadi, yezhizha rakamirirwa kwenguva refu.
Iyo ipfungwa yakakwana uye yepakutanga, iyo ichasimbisa chikamu chemuviri uye kuti isu tichaipedzisa nemavara akajeka, ane prints kana akasanganiswa neakajairika zvipfeko. Saka, kana iwe uchida kuona muunganidzwa wakanaka wezvose izvi, hapana chakafanana nechakaunzwa kwatiri Stradivari, nekuti anogara achirova sarudzo dzese dzaanotiratidza. Usazvipotsa!
1 Cheka chipfeko nemhete
2 Rokwe rakadhindwa rine mutsara wakafara kumusana
3 Nguo pfupi yepati yepingi
5 Rokwe dema rakaiswa
Cheka chipfeko nemhete
Es pfungwa yakafanana neyaipfekwa naMambokadzi Letizia. Kunyangwe iri kucheka kuri kuitika, inofanirawo kutaurwa kuti inowedzera mavambo uye chimiro chikuru chero kwaunotsika. Saka, kunyangwe vehumambo vanoshinga nepfungwa yepakutanga yakadaro. Muchiitiko ichi, Stradivarius ine imwe vhezheni yakafanana asi mune mapfupi maoko uye apo chena inotonga. Rudzi rwekutanga uye rwunobata kumeso rwepatinotanga kuratidza ganda rakatsvuka. Ne evasé siketi uye bodice yakagadzikana ine denderedzwa neckline, kubatana kwezvose zviri zviviri kunosimudzwa kuburikidza nekucheka uye mhete yepamberi inoburitsa nhevedzano yekuunganidza. Kufanana?
Rokwe rakadhindwa rine mutsara wakafara kumusana
Mhando iyi yekucheka yakachekwa ine shanduro dzakawanda. Nekuti dzimwe nguva ingori diki diki nzvimbo inoonekwa uye mune dzimwe, inopedzwa nehupamhi hwemutsipa kumashure, sezvazviri. Inopedzwa nehalter neckline asi izvo zvinozotungamira kumusana usina chinhu. Ehe, chipfeko pachacho chakanyanya kugadzikana, nekuda kweiyo elastic bands yainayo. Inoratidzwawo mumucheka wakapfava uye nemaruva anodhinda akanyorwa nekuda kwekubatanidzwa kwemumvuri. Ndiyo imwe yemafungiro iwayo ausingazokwanisi kuramba mwaka uno.
Nguo pfupi yepati yepingi
Mutambo wepati haugone kushaikwa muunganidzwa wezhizha seuyu. Nokuti kupera kwe satin kuchaonekwa mune iyi nguo pfupi ine mumvuri wepiniki iyo ichaita kuti iwe ude. Hongu handizvo zvese asi zvine a rhinestone criss cross izvo zvichapa chiedza chakawanda kune sutu pachayo. Nekungozviona chete, chishuwo chekufara chinotanga kuita chitarisiko chayo. Iye zvino zvese zvaunofanirwa kuita kupedzisa chitarisiko chako nezvimwe zvishongedzo zvesirivha uye unenge wakagadzirira kunakidzwa nehusiku hwakanakisa.
Mukuwedzera kune yakachekwa pachayo, iyo ndiyo protagonist nhasi, isu hatigone kukanganwa nezvemitsipa. Zvinoita sekunge iyo halter kupera ndiyo main protagonist yemaitiro akadai. Sezvo tichigona kuzviwana zvakanyanya mumadhirezi semutsoko. Iye zvino vekupedzisira ndivo vanopikisa, nokuti vanogonawo kuonekwa mune zvose mavara ekutanga uye mimvuri ine simba. Nekupedzisa kwegumbo rakakura, ivo vachave vakakwana kupfeka panguva dzakasiyana dzemasikati neusiku.
Rokwe dema rakaiswa
Rokwe dema hariperi uye nokuda kwechikonzero ichi, Stradivarius inewo yayo yatinoda. Nekuti ine yakaringana kupedzisa, iyo inokodzera silhouette yako uye inoitsanangura seisati yamboita. Mukuwedzera kune izvo zvakatemwa kumativi ose echiuno izvo zvatiri kuona zvakanyanya uye izvo, zvakare zvakare, zvinoratidzwa nenzira inonyengera. Iyo ipfungwa yakakwana yekupfeka nemhando dzakasiyana siyana, zvichienderana nemidziyo yaunowedzera. Isu tinosiya izvo kune yako sarudzo!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » fashoni » Chii chandinopfeka » Kuchekwa-chekwa kuri kuita kudzoka muzhizha rino
Crochet tops, maitiro muzhizha